Dowlada kenya oo sheegtay in ay kubiirayaan howlgalka Amisom todobaadka soo aadan
March 9, 2012 | Posted by admin
DUHUR-Dowladda Kenya ayaa maanta oo jimco ah shaacisay in ciidankeeda ka jooga Soomaaliya ay si rasmi ah toddobaadka soo socda ugu biiri doonaan askarta AMISOM ee howlaha nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab sidaas waxa sheegay Afhayenka ciidamada military-ga Kenya Emmanuel Chirchir .
Maj Chirchir ma sheegin maalin cad ah oo ciidanka ku biiri doonaan AMISOM laakin wuxuu sheegay in toddobaadka dambe ay tahay.
Wuxuu ku sheegay Boggiisa Twitter-ka ah in ciidamada Kenya ay hadda marayaan howlgalkoodii ugu dambeeyay.
Wuxuu kaloo sheegay ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda KMG ah in ay khamiistii shaley weerar ay ku qaadeyn deegan u dhow magaalada Afmadhow ee gobalka Jubadda Hoose halkaas oo ay ku dileeyn lix ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab.
Wuxuu sheegay in qoryo labo ah oo AK 47 ay ka furtyeen kooxdaas, .
Ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya soo galay bartamihii-October ee sanadkii horre waxana hadda ay kuu biirayaan ciidamada midowga Africa ee Uganda, Burundi iyo Djibouti.
Golaha amaanka QM ayaa dhawaan ansixiyay in tirada Askarta AMISOM oo horrey loo ogolaaday 12,000 asjkari in hadda lagaarsiiyo ku dhawaad 18,000 oo askari.
Kenya waxa ay fileysaa in ay hesho qalab iti Tabar dheeri ay oo la siiyo askarteeda la dagaalameysa Al-Shabaab,
Midowga Africa howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya waxa lagu siiyaa qalab iyo mushaar sidaas la mid ah Kenya ayaa hadda la siinayaa.
Wasiirka Gaashandhiga Kenya Yuysuf Haji ayaa labo toddobaad ka hor sheegay askarta midowga Africa in ay isticmaali doonaan qalab dabka damiya, Dareeska Uniform ah, Diyaarado dagaal iyo shaqaale kuwa Injineeriyiinta ah.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in ay ciidamada Kenya laga badli doono dharka marka ay ku biitayaan AMISOM, wuxuu kale sheegay in aan laga badali doonin goobaha ay hadda joogan oo aan loo wareejin doonin Muqdisho.
« Daily says Turkey in talks with Somali Islamist organization
MOGADISHU INTERNATIONAL AIRPORT,ONCE UPON A TIME »